Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ay Jubbaland ka ogolaatay in la xaliyo khilaafka kala dhexeeya DFS – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo maalinkii 3-aad Kismaayo ku sugan, ayaa Dowlad Goboleedka Jubbaland ka helay balan-qaad ah iney kala shaqeynayaan xalka uu ka dhex raadinayo maamulkooda iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS).
Warkan, oo lagu baahiyey SONNA, ayaa lagu sheegay inuu Madaxweyne Kuxigeenka 1-aad ee Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan, sheegay iney soo dhaweynayaan ujeeddooyinka uu xambaarsan yahay safarka uu Guddoomiye Cabdi Xaashi ku joogo magaalada Kismaayo.
Guddoomiyaha Aqalka Sare waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay iney Jubbaland u dhega-nuglaatay soojeedinta ah in la isu soo dummo iyada iyo DFS, waxaana uu ku celiyey inuu safarka uu ku joogo Jubbaland uu kuwo la mid ah ku bixin doono Dowlad Goboleedyada kale, si looga guul gaaro xal u helista khilaafka u dhaxeeya DFS iyo Dowlad Goboleedyada.
Natiijadaan hordhaca ah ee ay Jubbaland kusoo dhaweeneyso aragtida Golaha Aqalka Sare ee lagu wanaajinayo wada shaqeynta DFS iyo Dowlad Goboleedyada waxay timid kadib markii 2 maalin oo xiriir ah ay Kismaayo ku kulmayeen Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo Madaxda iyo Xubnaha Golayaasha Jubbaland. Warqad uu ku saxiixnaa Guddoomiyaha Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada, Axmed Ducaalle Geelle Xaaf (Madaxweynaha Galmudug), ayaa mar sii horreysay lagu soo dhaweeyey 8 qodob oo uu Golaha Aqalka Sare u gudbiyey Xukumadda Soomaaliya, hase ahaatee aysan warbaahintu sida ay Xukumaddu uga soo jawaabtay. Qodobadaas waxay ka hadlayeen waxa ay Dowlad Goboleedyadu ka tabanayaan DFS.